आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल असार २६ गते मंगलबार - Damak No.1 Online Patrika
आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल असार २६ गते मंगलबार
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, असार २६, २०७५
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल आषाढ २६ गते मंगलबार इश्वी सन् २०१८ जुलाई १० तारीख आषाढ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथी रोहिणी नक्षत्र गण्ड योग तैतिल करण चन्द्रमा बृष राशिमा सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु प्रदोष व्रत – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि लाभदायक साबित रहनेछ । बिश्वासिला ब्यक्तिहरुबाटँ सामान्य धोका हुन सक्नेछ ।
अधुराकार्यहरु सहजतापुर्ण सम्पादीत रहनेछन । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा मनग्य समय ब्यतित रहला । मानसम्मान प्राप्तीको योग बन्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा मधुरता छाउनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा दिन मध्यम रहनेछ ।
तात्कालिन यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । गरीरहेको कार्य सम्पादनमा सामान्य ढिलाईको सामना गर्नु पर्नेछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कलाकौशलको प्रयोगले आम्दानी दरीलो बन्नेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मन हर्षित तुल्याउला । खानपानमा सजग रहनु उत्तम रहनेछ ।
शारीरिक आलःयताका कारण गरीरहेको कार्य सम्पादनमा सामान्य ढिलाईको योग रहेकोछ । मान्यजनहरुको ःवाःथमा सामान्य समःया देखा पर्नेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । सभासम्मेलनमा सरीक भईनेछ ।
धार्मीक क्षेत्रको यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । आटँ शाहसमा बृद्धिहुने समय रहेकोछ । ईष्टमित्रजनको साथ सहयोगमा बृद्धिहुनाले जटिलकार्य सम्पादितहुनेछन साथै कार्य सम्पादनको श्रेय प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
वाणिका कारण सामान्य वादविवादको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानका कारण ःवाःथमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । पारिवारीक झमेलाले सताउन सक्नेछ । बिद्या तथा ब्यपारमा समय त्यति उत्तम छैन ।
सामान्य यात्रा पश्चात मनग्य आम्दानी प्राप्त हुनेछ । शारीरिक आलःयताले कार्य सम्पादनमा ढिलाई हुन सक्नेछ । अरुको बिश्वासमा गरीएका कार्यमा अपजसको सामना गर्नु पर्नेछ । दाम्पत्य शुख प्राप्त रहने दिन रहेकोछ ।
नजिकका मित्रजन बाट नै तपाईको कार्य सम्पादनमा समःया आई पर्नेछ । सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहने समय रहेको छ । अनावश्यक खर्चका कारण तात्कालिक आर्थिक अभाब रहन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । धार्मिक क्षेत्रको यात्रा रहन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । साजेदारी काममा भने सजग रहनु उत्तम रहनेछ । आय आर्जनका बिभीन्न श्रोतहरु फेला पर्नाले मन हर्षित रहनेछ ।
पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब रहन सक्नेछ । खानपानका कारण ःवाःथमा साधारण समःया देखा पर्नेछ । मान्यजनको सहयोगमा आम्दानी उत्तम रहन सक्नेछ ।
नयाँ मित्र प्राप्ती भएतापनि प्रतिपक्क्षी हरु सबल रहनेछन । प्रेम सम्बन्धमा भने सुधार आउनेछ । मनोरञ्जन पुर्ण यात्राको योग परेकोछ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम र समय खर्चनु पर्नाले सामान्य झन्झटको सामाना गर्नु पर्ला ।
आहा ! धुलिखेलमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एउटा सफल उदाहरण [फोटो फिचर]
आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ २९ गते मंगलबार
आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ २७ गते आईतबार